“Waxaan ku guuleysan karaa dhamaan tartamada kala duwan ee xili ciyaareedkan” – Emilio Butragueno – Gool FM
“Waxaan ku guuleysan karaa dhamaan tartamada kala duwan ee xili ciyaareedkan” – Emilio Butragueno
(Real Madrid) 15 Nof 2018. Halyayga kooxda Real Madrid Emilio Butragueno ayaa xaqiiijiyay in Los Blancos ay tahay koox aad u adag ee u dagaalami karta tartamada kala duwan, inkastoo uu kooxda ka tagay Cristiano Ronaldo.
Real Madrid ayaa xili ciyaareedkan kaga bilaawatay qaab xun ee aan wanaagsaneen iyagoo ku fashilmay in ay si wanaagsan ula tacaamulaan bixitaanka Cristiano Ronaldo iyo Zinedine Zidane.
Julen Lopetegui ayaa noqday badalka tooska ah ee Zinedine Zidane, balse natiijo xumi kooxda soo wajahday ayay maamulka Real Madrid go’aansadeen inay shaqada ka diraan waxaana badal loogaga dhigay tababare Solari.
Hadaba wargeyska “AS” ee dalka Spain ayaa wuxuu daabacay wareysi uu dhawaan bixiyay halyayga kooxda Real Madrid Emilio Butragueno waxyaabaha ugu muhiimsan uu ka hadlayna waxaa ka mid ahaa:
“Wali ma aanan gaarin bar-tamaha xili ciyaareedka, waxaan aaminsanahay inaan heysano koox weyn, waxaan filayaa inaan u dagaalami karno dhamaan tartamada kala duwan ee aan ka qeyb qaadaneyno”.
“Wali Real Madrid waa la’aanta Cristiano Ronaldo, mar walbana isagu waa ciyaaryahan weyn, balse maanta waxaan ku qanacsanahay inaan heysano koox xoogan inkastoo uu naga maqan yahay”.
Virgil van Dijk oo si weyn u amaanay xidiga bar-tilmaameedka u ah kooxaha Barcelona, Juventus, Man City iyo Bayern Munich.